Basikety : nodimandry tampoka i Oswald, mpanazatra ny MB2All | NewsMada
Basikety : nodimandry tampoka i Oswald, mpanazatra ny MB2All
Misaona ny eo amin’ny tontolon’ny basikety sy ny fanatanjahantena malagasy. Nodimandry tampoka, ny alakamisy teo, ny mpanazatra ny klioba avy eto Analamanga, MB2All, Oswald. Hatramin’ny ora sy fotoana nanoratanay, tsy mbola fantatra mazava ny anton’ny nahafatesan’ity mpanazatra fantatry ny maro eo amin’ny tontolon’ny basikety malagasy ity. Marihina fa efa an-taony maro no nitondrany ny klioba MB2All Analamanga ary efa nahazo vokatra maro izy ireo tamin’izany.
Ankoatra izay, efa nitondra ny ekipa voafantin’Analamanga teo amin’ny fiadiana ny “Challenge National U22”, fifaninanam-pirenena nandraisan’ireo faritra 22 anjara izy. Efa maromaro ihany koa ny mpilalao novolavolain’i Oswald izay efa miparitaka na/sy tafiditra amin’ireo klioba isan-tsokajiny.
Etsy andaniny, noho ity voina mampalahelo mahazo ny klioba MB2All Analamanga ity, nisy fiovana ny fandaharan-dalaon’ny fiadiana ny tompondaka rezionaly, izay efa miditra amin’ny manasa-dalana, amin’ity faran’ny herinandro ity.
Izahay eto amin’ny gazety Taratra dia maneho fiaraha-miory amin’ny fianakaviany sy ny klioba MB2All nilaozan’i Oswald.